TORA Dornier Do28A-1 Cassic Wings FSX - Rikoooo
Downloads 4 840
mhando mbiri KUITA-28A-1 uye ITAI-28A-1S unhu huru 6 textures uye wakanaka rakapotsa Cockpit (VC). Izvi mapatya-injini kuchaita nyore kuwana nzvimbo hanga yenyu.
Mapatya-engined Do 28 yakazonatsiridzwa mukupera 1950s inobva chete-engined Do 27. Yakanga yakagadzirirwa somupristi bapiro monoplane bapiro tichiratidza vachasimudza mano uye necheshure kabhini (vakarara 6 vanhu) uye muswe pakati Do 27. Vose Lycoming uye makumbo chikuru kumhara giya vakanga streamlined iine zvimbi pasi. Kufanana Do 27, Do 28 aikudzwa nedare yakakwirira dzevashanyi akurumidze, ayo kwazvo pasi-nokukurumidza kutiza uye tuoli maitiro akagadzirira pamakwara zvishoma. Kutiza rokutanga C 28 A akashongedzerwa maviri Lycoming 0-540 255 zvapano uye chipasa propellers vakatora nzvimbo musi 20 March 1960 muna Oberpfaffenhofen. The Do 28 B yavo kwaari, Lycoming ıO-540 kuti 290 zvapano uye-bladed zvitatu propellers. The DO 28 C aiva masere seater shanduro mbiri 560 zvapano turboprop pamuti ane kukura haana yapera. Dzinokwana 120 ndege mhando C 28 A uye B vakaitwa. Vamwe namano dzichiri uchibhururuka Africa uye South America.